IGBT Snubber ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China IGBT Snubber စက်ရုံ
snubber ဆားကစ်များသည် switching circuit များတွင်အသုံးပြုသော diodes များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် reverse recovery process အတွင်းပေါ်ပေါက်လာနိုင်သော overvoltage spikes မှ Diode ကိုကယ်တင်နိုင်သည်။
IGBT ပါဝါအီလက်ထရောနစ်အသုံးချမှုများအတွက်လက်ရှိအမြင့်ဆုံးလက်ရှိ snubber ရုပ်ရှင် capacitors များဒီဇိုင်းထုတ်သည်
IGBT SMJ-P ကို ​​snubber
ဗဓေလသစ်နှင့်တံဆိပ်ခတ် 1. ပလပ်စတစ်အိတ်,
၂။ Tin-plated copper insert inserts, IGBT အတွက်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း၊
၃။ မြင့်မားသောဗို့အားခံနိုင်ရည်၊ tgδနိမ့်ကျခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်း။
4. ESL နှင့် ESR အနိမ့်၊
ယာယီဗို့အားမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောမြင့်သောလက်ရှိလည်ပတ်မှုအတွက် CRE snubber film capacitors ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
1. မြင့်မားသော DV / dt စွမ်းရည်ကိုဆီးတား
၂။ IGBT အတွက်လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်း
မြင့်မားသောပါဝါအသုံးချမှုများအတွက်အဆင့်မြင့် IGBT Snubber capacitor ဒီဇိုင်း
6. ul အသိအမှတ်ပြု။
Polypropylene Snubber Capacitors သည်မြင့်မားသောဗို့အား၊ မြင့်မားသောလက်ရှိနှင့်မြင့်မားသောသွေးခုန်နှုန်းအသုံးချခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်
Snubber Capacitors သည် axial terminal များပါ ၀ င်သော high-current မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း capacitors ဖြစ်သည်။ Axial Film Capacitors များကို CRE တွင်ရရှိနိုင်သည်။ Axial Film Capacitors အတွက်စာရင်း၊ စျေးနှုန်း၊
၁။ ISO9001 နှင့် UL လက်မှတ်ရ၊
လက္ကားမြင့်မားသောဗို့အား Snubber Capacitor
CRE သည် snubber capacitors အမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့သည်။
၁။ CRE မှထုတ်လုပ်သောတီထွင်ဆန်းသစ်သော snubber capacitors
၂။ ရုပ်ရှင် capacitor ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ဦး ဆောင်သူ။
၃။ သင်သည်ထူးခြားသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များလိုအပ်ပါကစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော snubber capacitor အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ design center သို့သွားပါ။
metalized ရုပ်ရှင် IGBT Snubber capacitor
ဂဟေဆော်ခြင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်လက်ရှိအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင် Capacitor snubber (SMJ-TC)
Capacitor မော်ဒယ် SMJ-TC
၃။ Mylar tape winding technology
၅။ နိမ့်သောညီမျှသောစီးရီး Inductance (ESL) နှင့် Equivalent Series Resistance (ESR)
အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၌ switching အစိတ်အပိုင်းအတွက် ၂. Peak Voltage နှင့် Peak Current စုပ်ယူမှုနှင့်ကာကွယ်မှု
ဤ capacitors များသည် GTO protection တွင်များသောအားဖြင့်တွေ့ရသော current current Pulse များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ axial ဆက်သွယ်မှုသည်စီးရီး inductance ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးခိုင်မာသည့်စက်မှု mounting အားထားနိုင်သောလျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွင်းထုတ်လုပ်သောအပူ၏အပူလွန်ကဲခြင်းကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
IGBT လျှောက်လွှာအတွက် polypropylene film Snubber capacitor ၏ low loss dlectric
၁။ မီးလျှံနှောင့်နှေးစေသောဝိသေသလက္ခဏာများကို UL94-VO နှင့်ကိုက်ညီသောပလပ်စတစ်အိတ်နှင့် epoxy end fill ဖြင့်အသုံးပြုသည်။
၂။ Terminal style နှင့် case size များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။